अतिक्रमण हटाउने सूचनाले वीउवासङ्घ तात्यो, गुप्ताको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति
प्रस, वीरगंज, १६ फागुन/ सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले वीरगंज भन्सारदेखि दामेचौर (मकवानपुर/धादिङ)सम्मको राजमार्ग सडक सीमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेपछि वीरगंज क्षेत्रका प्रभावित मानिसहरू तातेका छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा आज सङ्घको कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले वैकल्पिक राजमार्ग भएकोले वीरगंजको पुरानो संरचनालाई भत्काउन नहुने तर्क राखेका थिए । छलफलमा सहभागी नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति सुरेन्द्र चौधरीले वैकल्पिक राजमार्ग भएकोले वीरगंजको प्राचीनता, ऐतिहासिकता मेटाउने गरी राजमार्ग खाली गराउने बहानामा तोडफोड गरिनु उचित नहुने बताए । एकीकृत माओवादीका हरि मण्डलले अतिक्रमण हटाउने कार्यसँगै निर्माण कार्य गरिनुपर्ने अन्यथा भत्काउनुको अर्थ नरहने तर्क पेश गरे । त्यस्तै मालेका शत्रुघ्न उपाध्यायले वीरगंजको सुन्दरता एवं वृहत्तर विकासको लागि राजमार्ग फराकिलो पार्ने अभियानको स्वागत गरे । छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री करिमा बेगमले कुनै पनि हालतमा वीरगंज शहरको पुरानो संरचना भत्काउन नदिने बताइन् । त्यस्तै वीउवासङ्घका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश
भारतीय ट्रकमा सरदर दश टन गिट्टी बढी
प्रस, गरुडा, १६ फागुन/ रौतहटको बाटो भएर भन्सारबाट भारत निर्यात हुने भारतीय ट्रकमा सरदर दश टन बढी गिट्टी लोड हुने गरेको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ । दैनिक दर्जनौं ट्रक भारत जाने गिट्टीलाई कसैले चेकजाँच नगरेको अवस्थामा आज रौतहट प्रहरीले गरुडामा चेकजाँच गर्दा गिट्टीको परिमाण बढी पाइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी निरीक्षक कमल गिरीको कमान्डमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार थापा र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी निरीक्षक गीतनारायण चौधरीसमेतको प्रहरी टोलीले गरुडामा भारतीय ट्रकलाई रोकेर श्रीराम सुगर मिल्सको धर्मकाँटामा चेकजाँच गरेका थिए । चेकजाँचको क्रममा दशचक्के ट्रकले बोक्ने अनुमतिभन्दा सरदर दश टन बढी गिट्टी भारतीय ट्रकहरूले बोकेका पाइएको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताएका छन् । प्रहरी टोलीले आठवटा भारतीय ट्रक र दुईवटा नेपाली टिपरलाई धर्मकाँटामा नापतौल गरेपछि भारतीय ट्रकले बढी परिमाणमा गिट्टी लैजाने गरेको पाइएको हो । गौर भन्सार कार्यालयमा नापजाँचको व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको र जनस्तरबाट ट्रकमा बढी गिट्टी गइरहेको गु
समाज र प्रहरीको सम्बन्ध
- सञ्जय साह ‘मित्र’ पहिलेका मानिस प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै डराउँथे । अहिले विश्वव्यापीरूपमा सामुदायिक प्रहरीको धारणा आएको छ । सामुदायिक प्रहरीले समुदायमा रहेर समुदायसित मिलेर काम गर्छ भन्ने मान्यता छ । हुन पनि नागरिकसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालय तथा निकायहरू भनेका एक हिसाबले सामुदायिक नै हुन् । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी भन्नु चाहिँ सामुदायिक प्रहरी हो जस्तो मलाई लाग्छ । समुदायमा हरेक क्षेत्रको सकारात्मक र नकारात्मक सम्बन्ध हुने गर्छ । यसपटक समाजको सम्बन्ध नेपाल प्रहरीसित र अझ नेपाल प्रहरीको पनि रौतहट प्रहरीको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । अहिले रौतहटमा एउटा सकारात्मक सन्देश गएको छ, आर्केस्ट्राको नाच बिहेमा लैजाने हो भने प्रहरीले समात्छ । यो हल्ला फैलिएको एक हप्ता पनि भएको छैन । तर एक हप्तापहिले जयनगरको फर्निचर मेलामा दिउँसै आर्केस्ट्रा नाचको नाउँमा सडकमैं अश्लीलता प्रदर्शन भएको सुनिएको थियो, जसले साधारण यात्रुलाई लाजमर्दो बनाएको थियो । अप्रत्यक्षरूपमा प्रहरीको संरक्षणमा यस्ता नाचहरू हुने गर्थे । प्रहरीलाई दुईचार पैसा दिने र नाचको सुरक्षा गर्न लगाउने । गाउँमा
प्रहरीले प्रत्येक दिन अवैध रक्सी उत्पादनविरुद्ध कारबाई चलाइरहेको छ । अवैध घरेलु रक्सी बरामद, मदिरा नष्ट र भट्टी तोडफोडसम्बन्धी समाचारहरू प्राय: आइरहेका छन् । अवैध मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रहरी एकाइले सदाबहार अभियान चलाइरहेको छ । कुनै बेला जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व एवं वाणिज्य कार्यालयको सहभागितामा विशेष अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेको पाइन्छ । घरेलु रक्सीका कारण समाजमा अपराध तथा अशान्ति निम्तिने भएकाले सोविरुद्ध कारबाई प्रहरीको दायित्व हो । अवैध मदिराका भट्टी उद्योगहरूबाट कर छली हुने भएकोले नियन्त्रण गर्नु राजस्वसम्बन्धी एकाइहरूको दायित्वभित्र पनि पर्छ । त्यसैगरी अवैध घरेलु रक्सी उत्पादकहरूले अखाद्य पदार्थहरू मिसाउने र मानव स्वास्थ्यबारे उनीहरूले विशेषज्ञ मापदण्ड प्रयोग नगर्ने भएकोले अवैध मदिरा नियन्त्रणतर्फ गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी एकाइको दायित्व पनि छँदैछ । यति धेरै निकायहरूको निगरानी र नियन्त्रण तथा कारबाईको दायित्वभित्र परेको अवैध घरेलु मदिराभट्टी भने दिनानुदिन फस्टाउँदो छ । गाउँको झुपडीदेखि शहरको महलसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको छ । सर्वहारा श्रमिक मजदुरदेख
मुलुक लिक बाहिर छ– सोनल नाटक बन्द गर– मियाँ
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ मधेसी पत्रकार समाज पर्सा शाखाको प्रथम जिल्ला अधिवेशन आज वीरगंजमा सम्पन्न भयो। समाजका पर्सा अध्यक्ष सन्तोष पटेलको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री तथा पूर्वसभासद् जीतेन्द्र सोनल थिए। शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेता सोनलले वर्तमान अवस्थामा मुलुक लिकबाट बाहिर गएको रेल सरह भएको बताए। लिकमा ल्याउनका लागि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन र चुनाव अनिवार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै उनले दलीय नेतृत्वमा दलहरू सहमत हुन नसकेको कारण प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गरेर भएपनि मङ्सिरभित्रै चुनावका लागि तमलोपाले सहमति जनाएको स्पष्ट पारे। “सरकार लगामविहीन अवस्थामा छ । मुलुकमा अराजकता व्याप्त छ, मधेसको मुद्दा र विघटित संविधानसभाका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा छ,” नेता सोनलको कथन थियो। समाज परिवर्तनका विभिन्न चरणमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै सोनलले वर्तमान अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरू न्यूनतम पारिश्रमिकबाट वञ्चित रहेको, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितामा धम्की एवं चुनौतीहरू आउ
पर्साको जगरनाथपुर–मिलनचोक सडकखण्ड ग्रेभल गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै उपसमितिले निर्माण कार्य रोक्का गरेको छ। सवा ८ कि.मि.लम्बाइ र ९ मिटर चौडा उक्त सडक ग्रेभल गर्दा निर्माण कम्पनीले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको उपभोक्ताको आरोप छ। निर्माण कम्पनीले लागत स्टीमेटअनुसार नै कार्य भइरहेको दाबी गरेको छ भने उपसमितिले लागत स्टीमेटविपरित कार्य भइरहेको आरोप लगाएको छ। निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता एकअर्काबीच सद्भाव र सहयोगी रहनुपर्ने पक्ष हुन्। यी दुई पक्षलाई एकअर्काको परिपूरक पनि मानिन्छन्। यी दुई पक्षबीच झगडा गराउने वातावरण समाजका भ्रष्टाचारीहरूले सृजना गरेका छन्। पेसाप्रति वफादार नभएका भ्रष्ट ठेकदारहरू हैसियतभन्दा कम लागतमा ठेक्का सकार गर्छन्। स्टीमेट नचोरे निर्माण सम्भव हुँदैन अनि विवाद हुन्छ। समाजका केही भ्रष्ट व्यक्तिहरू मसल र मास देखाएर ठेकेदारसँग दाम माग्छन्, दाम नदिए काम अवरुद्ध गर्न उनीहरू अग्रसर हुन्छन्। फेरि त्यहाँ विवाद हुन्छ। यस्ताखाले विवाद र अवरोधहरू सृजना गराउने माला जपेर बसेका हुन्छन्, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलका अगुवाहरू। ताकि सुल्झाउने या चेकजाँच गर्
ठोरी विद्युतीकरणमा अवरोध यथावत् उपल्लो निकायको पहल जरुरी
प्रेम लामा, ठोरी, १५ फागुन/ मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा निर्माणाधीन निर्मलबस्ती–ठोरी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत दुईवटा पोल खडा गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अवरोध गरेपछि स्थानीयस्तरमा आज बसेको दुई पक्षीय वार्ता निष्कर्षहीन टुङिगएको छ। नेपाल–भारत दशगजानजिक पर्ने स्थानमा खडा गरिएको दुईवटा विद्युतीय पोल अज्ञात समूहले भाँचिदिएको थियो । सोही स्थानमा पुन: पोल खडा गर्न एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीले अवरोध गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक पोल गाडी सकेपछि माटो पुर्न बाँकी रहँदा एसएसबीका जवानहरू आएर अवरोध गरेका थिए सो सम्बन्धमा नेपाली र भारतीय पक्षबीच एसएसबी पोस्ट भिखनाठोरीमा आज वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाल पक्षबाट इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक मुक्तिनारायण चौधरीको नेतृत्वमा जिविस पर्साका सहायक इन्जिनियर ईश्वरदेव यादव, विद्युतीकरण ठेक्का कम्पनी जनमुखी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि नरेशप्रसाद केशरी र ठोरी खोला पोल निर्माण कम्पनी मृत एन्ड सञ्जीवनी कम्पनीका प्रतिनिधि लक्ष्मण उपाध्यायको सहभागिता थियो। त्यसैगरी भारतीय पक्षबाट नरकटियागंजका एसडिएम महम्मद आलमको नेतृ
प्रतीककर्मी भण्डारी सम्मानित
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ प्रतीक दैनिकका पथलैया संवाददाता दिवाकर भण्डारी मङगलवार सम्मानित भएका छन्। पत्रकारिताको माध्यमबाट जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको भन्दै सिमरास्थित एकता पब्लिक स्कूलले पत्रकार भण्डारीलाई सम्मानित गरेको हो। १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार भण्डारीलाई सम्मानित गरिएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डा. विश्वम्भर शर्मा, विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोपालप्रसाद खतिवडा र अध्यक्ष कल्पना खतिवडाले दोसल्ला ओढाइ सम्मानपत्रसहित सम्मानित गरेका थिए। विद्यालयले आफ्ना पूर्वविद्यार्थी कम्प्यूटर इन्जिनियर सरोज भट्ट र डा. इरशाद अन्सारीलाई समेत सम्मानित गरेको थियो। पेशागत क्षेत्रमा क्रियाशील रही विद्यालयको नामसमेत उच्च गरेका तीनैजनालाई सम्मानित गरिएको प्रअ खतिवडाले बताए। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आकर्षक नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै चेतनामूलक नाटक प्रस्तुत गरेका थिए।
हामी कुन भूमरीमा फसेका छौं
विनोद गुप्ता नेपाली राजनीति विदेशी हस्तक्षेपबाट चल्छ भन्ने कुराको लागि अब प्रमाण खोजिरहनुपर्ने अवस्था रहेन । पहिला एमाले नेता प्रदीप नेपाल र अब आएर नेका सभापति सुशील कोइरालासमेतले यो कुरा सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा उहाँले राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा ४ वटै राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न स्वीकार गरेको हो भन्ने स्पष्टोक्ति दिंदै यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेमा नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका पठाउने धम्की प्राप्त भएको जनाउनुभएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा युरोपियन युनियनका देशहरू रहेका पनि जनाउनुभएको छ। तर नेपालको कूटनीति अमेरिका र भारतलाई छाडेर युरोपियन देशहरूका दबाबले मात्र चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि यथार्थ हो। यसै प्रसङगमा सीपीएन माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले नेपालमा उपनिवेशवादी एवं विस्तारवादीहरूको चीनविरोधी गतिविधिहरू बढ्दै गएकाले नेपालले यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको हो भन्ने भनाइ आएको छ। उहाँको यस भनाइको विश्लेषण गर्ने हो भने राजा वीरेन्द्रको हत्या प्रकरणदेखि संविधानसभा भङग गर्दासम्
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा माओवादीको भूमिकामा तथ्य आपैंm बोल्दछ
अधिवक्ता दामोदर पौडेल एकीकृत नेकपा माओवादीले यो देशको नाम र झन्डा बदल्न चाहेको र त्यसबारेमा संविधानसभामा समेत छलफल गरेको तथ्य एमाले नेता भीम रावलसमेतले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन सङ्घीयतामा प्रान्तलाई देशबाट अलग हुनेबाहेक अरू सबै अधिकार दिनेसमेत माओवादीको एजेन्डा हो। सबै प्रान्तले अलग हुन चाहेमा र अरू देशमा नै मिल्न चाहेमा देशबाट अलग हुनबाट रोक्ने कानुन र संविधानलाई बदल्न सकिन्छ। युगोस्लाभिया आज एउटै देश छैन, जर्मन एउटै देश बनेको छ। त्यहां संविधान बदलेर नै सबै सम्भव भएको हो। सरकारमा पुग्नुभन्दा पहिला कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताको चर्को नारा लगाउँछन् तर सरकारमा पुगेपछि सरकार जोगाउन विदेशीको शरणमा समेत पुग्दछन्। अहिले यो जिम्मा माओवादीको भागमा परेको छ। त्यसैले त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो देशमा विदेशीको दबाबलाई सबैभन्दा बढी रोक्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस नै रहेछ भने र काङ्ग्ेरस नेता सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेकोमा विदेशीको कारणले सम्भव नभएको बताउनसमेत पछि परेनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने चाबी नै विदेशीसँग रहेको
अवैध हातहतियार र लागू पदार्थ बुझाउन प्रहरीको ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना अभियान
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले अवैध हातहतियार र लागू पदार्थ ३५ दिनभित्र बुझाउनको लागि जिल्लावासीहरूमा अनुरोध गर्दै सोसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले यही फागुन ९ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सो अवधिमा अवैध हातहतियार र लागू पदार्थमा बुझाउँदा कारबाई नगरिने र सो अवधिपछि पक्राउ पर्नेहरूलाई सोही कानुनअनुसार कारबाई गरिने जानकारी दिंदै हालसम्म पाँच स्थानमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले जिल्लाको पोखरिया गाविस, बहुअर्वाभाठा र अलौपछि आज गादीको र·पुर टाँडी र महादेवपट्टी गाविसमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले सो गाउँमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएको कारण पर्सा जिल्लामा अवैध हातहतियार र लागू पदार्थ गाँजा, चरेस अत्यधिक मात्रामा रहेको तथ्याड्ढ प्रकाशमा आएपछि गृह प्रशासनले ३५ दिनको समयसीमा प्रदान गरेको र सो अवधिमा बुझाउनेहरूको हकमा सजायमाफीको व्यवस्था गरेको र त्यसउपरान्त व्यापक सर्च अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।
स्थानीयवासीद्वारा निर्माण उपकरणहरू कब्जा
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ पर्साको जगरनाथपुर–मिलनचोक सडकखण्डलाई ग्रेभल गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भनी स्थानीय उपसमितिका सदस्यहरूले एक सातादेखि काम रोक्का गराएकोमा ठेकेदारले रातिपख निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीयवासीले ठेकेदारका निर्माण उपकरणहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन् । ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २ करोड १६ लाखको लागतमा ग्रामीण तथा पहुँच सुधार परियोजना (आरएआईडीपी) अन्तर्गत लिएको ठेक्कामा सकारबमोजिम सडकमा ग्रेभल गर्ने कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै स्थानीय उपसमितिले एक साताअघि सडक निर्माण कार्य रोकेको थियो । उपसमितिका सदस्यहरूले जिविस र परियोजनाको कार्यालयमा सोसम्बन्धी उजुरी गर्दै ठेकेदारलाई कबोलअनुसारको कार्य गर्न सुझाएकोमा ठेकेदारले अटेर गरी अनियमित कार्यलाई निरन्तरता दिएको कारण सडक ग्रेभल गर्ने कार्य रोक्का गरिएको सचिव मोहन चौधरीले बताए । ठेकेदारले रोक्का रहेको सडक ग्रेभल गर्ने कार्यलाई राति निरन्तरता दिएको भन्दै अहिले स्थानीयवासीले ठेकेदारको एक्साभेटर, लोडरसहित ३ थान टयाक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ । कबोलअनु
१५ वर्षमुनिको फूटबलमा युनाइटेड र जनजीवन विजयी
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १४ फागुन/ १५ वर्षमुनिको राष्ट्रिय फूटबल प्रतियागिताका लागि खेलाडी चयन प्रक्रिया अन्तर्गत आज भएको दुई खेलमा वीरगंज युनाइटेड क्लब र जनजीवन हेल्थ क्लब सुखचैना विजयी भएका छन् । नारायणी र·शालामा भएको पहिलो खेलमा वीरगंज युथ एकेडमीलाई युनाइटेड क्लबले शून्यका विरुद्ध एक गोल गरी पराजित गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो खेलमा जनजीवन हेल्थ क्लब सुखचैनाले पर्सा फूटबल क्लबलाई एकको विरुद्ध दुई गोलले पराजित गर्‍यो । पर्सा फूटबलको तर्फबाट विनय चौधरीले गोल गरेका थिए भने सुखचैनाका तर्फबाट राजु मण्डलले दुई गोल गरेका थिए । म·लवार दुईवटा सेमिफाइनल खेल हुने आयोजक समितिले जनाएको छ । पहिलो सेमिफाइनल खेल वीरगंज युनाइटेड र ग्यालेक्सी युथ क्लबबीच हुने भएको छ भने दोस्रो सेमिफाइनल खेल युवा स्पोट्र्स क्लब वीरगंज र जनजीवन हेल्थ क्लब सुखचैनाबीच हुने आयोजक समितिले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको वैधानिकता र कानुनविद्लाई चेतावनी
- अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव यसै हप्ता नेपाल बारका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केही संवैधानिक कानुनका विद्वानहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक कदम हुने बताए । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सखाप पारी लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ भनी बताएका छन् । कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री नबन्नुस् भनी प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरे भने नियुक्त नगर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई पनि आग्रह गरे । ती विद्वत् वर्गको आग्रहमा राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएनन् तर प्रधानमन्त्रीले यो कदम संवैधानिक रहेको भनी अडान लिंदै ती कानुनविद्हरूसँग संविधानको धारा–धारामा छलफल गर्ने चुनौती दिए । आफू कानुनको विद्यार्थी नभएपनि कानुनविद्हरूलाई छलफल गर्न चुनौती दिए । यो चुनौतीको खासै प्रतिक्रिया न त नेपाल बारबाट आयो, न त अदालतबाट, न त संविधानविद्हरूबाट । त्यसपछि एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्मर कसेर लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको यस चेतावनीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराको सड्ढेत गर्छ । एक मुलुकमा गैरकानुनी क्षेत्रका व्यक्ति नै कानुनविद्भन्दा
कृषिउपज र बजार
निजगढका किसानहरूलाई गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ पाउन हम्मेहम्मे परेको छ । अर्थात् निजगढमा गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ५ रुपैयाँभन्दा कम छ । सोही समयमा वीरगंजको तरकारी बजारमा गोलभेँडा प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । बिक्रेताहरूका अनुसार प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ गोलभेँडा वीरगंजमा यसवर्षकै सस्तो मूल्य हो । गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाएकोमा बारा निजगढका किसानहरू चिन्तित छन् भने छिमेकी जिल्ला पर्सा वीरगंजका उपभोक्ताहरू गोलभेँडाको मूल्य त्यति नघटेकोमा असन्तुष्ट छन् । निजगढ र वीरगंज ४३ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको दूरीमा अवस्थित छ । बितेको पुस पहिलो साता बाराको सिम्रौनगढका कृषकहरूले फूलगोभी प्रतिकिलो १ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका थिए । त्यतिबेला वीरगंजको बजारमा प्रतिकिलो १२ देखि १८ रुपैयाँसम्म फूलकोभी बिक्री भइरहेको थियो । सिम्रौनगढ र वीरगंजको दूरी ३६ किलोमिटर मात्र छ । मुलुकको हिमाली–पहाडी जिल्लाहरूमा स्याउ र सुन्तलाले बजार नपाएर कुहिंदा तराईका उपभोक्ताहरू फलफूल नपाएर भौंतारिरहेका हुन्छन् । तराईका किसानले धानको उचित मूल्य नपाएर रन्थनिरहेको बेला हिमाल–पहाडका उपभोक्ताहरू
वीरगंजमा ट्राफिक सप्ताह शुरू
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पर्साको आयोजनामा आजदेखि वीरगंजमा ट्राफिक सप्ताह शुरू भएको छ। अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिक सप्ताहको उद्घाटन गरेका थिए । ट्राफिक सचेतना जागृत गराउनका लागि र्‍याली र कोणसभाको आयोजना गरिएको थियो। घण्टाघरबाट निस्केको ट्राफिक सचेतना र्‍यालीले नगर परिक्रमा गरेको थियो। र्‍यालीमा सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक सेवा केन्द्र, विद्यार्थी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशागत सङगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। र्‍यालीपश्चात् घण्टाघरमा आयोजित कोणसभामा प्रमुख अतिथि प्रवउ खनालले वीरगंजलाई सपनाको नगरमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आमनागरिकको सहयोग रहेको खण्डमा वीरगंजलाई तीन महिनाभित्र नौलो शहरमा परिणत गर्ने बताए। निमित्त प्रजिअ लुकबहादुर क्षत्रीले ट्राफिक नियमको पालना सवारीचालकले मात्र गरेर नपुग्ने बताउँदै आममानिसले पनि पालना गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रम जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक विज्ञान बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा
अवैध हतियार सङकलन अभियान
प्रस, रौतहट, १३ फागुन/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले अवैध हातहतियार सङकलन अभियान शुरू गरेको छ। आज सदरमुकाम गौरमा आयोजित साप्ताहिक जनचेतनामूलक विशेष कार्यक्रमको उद्घाटनसँगै जिल्लालाई अवैध हतियारमुक्त जिल्ला बनाउने प्रयासको सुरुआत भएको हो। प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराम परियारले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्लामा केही व्यक्तिविशेषले लुकाएर राखेका, कानुनको अज्ञानताका कारण आफूसँग राखेका वा अन्य कुनै प्रयोजनले घरसमाजमा राखिएका अवैध हतियार तथा गोलीगठ्ठा नजिकका प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरीका एकाइहरूमा बुझाउन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले सरकारको अनुमतिबिना हातहतियार राखेका छन् भने सो हतियारहरू पैंतीस दिनभित्र बुझाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक सूचनाको बेवास्ता गरी अवैधरूपमा हातहतियार लुकाइछिपाइ राखेको पाइएमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार कारबाई गर्ने प्रहरी उपरीक्षक परियारले बताए । पैंतीस दिनपछि व्यापकरूपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यस्ता हतियारहरूको खोजी तथा खानतलासी अभियान सञ्चालन गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जनाएक
निर्माण कम्पनीको प्रशंसा !
पर्साको हरपुर गाविस वडा नं. ८ मा स्थित सिंघियाही खोलामा नवनिर्मित पक्की पुल उद्घाटन गरिएको छ। दुई करोड पैसठ्ठी लाख रूपैयाँको लागतमा निर्मित उक्त पुलको उद्घाटन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहमा सहभागीहरूले पुल निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए। निर्माणस्थल आसपासका बासिन्दा तथा सेवाग्राहीहरूले पनि निर्माण कम्पनीलाई धन्यवाद दिए। निर्धारित समयमा नै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको हुनाले निर्माण कम्पनी धन्यवाद एवं प्रशंसाका पात्र बनेका थिए। लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर जतिसुकै रटान लगाएपनि विकास निर्माण बजेटमा जनताको पहुँच छैन। सत्ताको आशीर्वादप्राप्त पहुँचवालाहरूको भने सहज पहुँच छ। अपवादको रूपमा सर्वसाधारणले अति आवश्यक अवस्थामा पाउने योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। योजना साकार हुन नदिन अवरोध पुर्‍याउने कार्य निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। विकास निर्माणको लागि जनता कति आकुलव्याकुल छन् भन्ने कुरा सिंघियाहीमा पुल निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कम्पनीले पाएको प्रशंसाबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। पुलको गुणस्तरको कुरा छोडौं, पुल निर्माण कार्य
परीक्षामा बढी अङक ल्याउन यसरी अध्ययन गरौं–१३
अनन्तकुमार लाल दास मस्तिष्कको क्षमता अनन्त छ। मस्तिष्कले जे पनि गर्नसक्छ। अज्ञातका अनुसार मस्तिष्क एउटा आधुनिक कारखाना हो। तपाईंले फोहरबाट मल बनाउनुहुन्छ वा मलबाट फोहर, यो तपाईंमाथि निर्भर छ। त्यहीं विश्वरूप राय चौधरीले भन्नुभएको छ,“मस्तिष्कको क्षमता कति हो भन्ने समस्या होइन, तर समस्या त्यसको सीमाहीन क्षमताको समुचित प्रबन्ध गर्नु हो।” यस कारण सङ्घर्ष गर्ने मानिसलाई सफलताका लागि आफ्नो मस्तिष्कको बढी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वैज्ञानिहरूका अनुसार मस्तिष्करूपी यस अनौठो मेशीनमा मुख्यतया पाँच प्रकारको कार्य गर्ने क्षमता हुन्छ। मस्तिष्कको पहिलो काम हो ज्ञान प्राप्त गर्नु । हामीसँग पाँचवटा काम गर्ने इन्द्रियहरू छन् । यी हुन्– छाला, आँखा, नाक, जिब्रो र कान। यी इन्द्रियहरूले मात्र आ–आफ्नो काम गर्छन्, तर ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उदाहरणको लागि यदि कसैको दिमाग खराब छ भने उसको आँखाले सबै थोक हेरिरहेको हुन्छ तर त्यसलाई चिन्न सक्दैन । उसलाई रूख, रूख जस्तो लाग्दैन । यसको अर्थ के भयो भने उसले हेर्न सक्छ तर बुझ्न सक्दैन किनभने बुझ्ने काम मस्तिष्कको हो। मस्तिष्कको अर्को काम सूचना सङकलन गर्
युनाइटेड र ग्यालेक्सी विजयी
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ १५ वर्षमुनिको राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिताका लागि खेलाडी चयन प्रक्रिया अन्तर्गत आज भएको खेलमा वीरगंज युनाइटेड क्लबले बिर्ता एलेभन स्टारलाई पराजित गरेको छ। नारायणी रङगशालामा आयोजित प्रतियोगितामा वीरगंज युनाइटेडले बिर्ता एलेभेन स्टारलाई १ का विरुद्ध ५ गोलको अन्तरले पराजित गरेको छ। यसैगरी हिजो ग्यालेक्सी युथ क्लब पिपरा र लक्ष्मनवा युवा क्लबीच विवाद भएपछि स्थगित गरिएको खेल आज खेलाइएको थियो। आजको खेलमा ग्यालेक्सी युथ क्लबले लक्ष्मनवा युवा क्लबलाई ० का विरुद्ध १ गोलको अन्तरले पराजित गरेको अखिल नेपाल फूटबल सङ्घ, पर्साका विश्वेश्वर पटेलले बताए ।
अनुदान कटौती, राजस्व घट्दो, वीउमनपाका चरम आर्थिक सड्ढटमा
प्रस, वीरगंज, १२ फागुन/ वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय चरम आर्थिक सड्ढटमा परेको सड्ढेत देखापर्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चु·ीकरको विकल्पमा दिंदै आएको अनुदान सहयोगबापतको वार्षिक १४ करोड ३० लाखमध्ये ५ करोड कट्टा गरेको छ । त्यसैगरी एलजीसीडीपी कार्यक्रम अन्तर्गतको वार्षिक ५ करोड अनुदानमध्ये २ करोड पनि कटौती भएको छ । यसरी वार्षिक सात करोड रुपैयाँ अनुदान कट्टा भएपछि वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय चरम आर्थिक सड्ढटमा पर्ने अवस्था आएको छ । वीउमनपाको आन्तरिक राजस्व सड्ढलन पनि गतआवको तुलनामा घट्दो छ । गतआवमा घरजग्गाबाट २ करोड ३१ लाख सड्ढलन गरेको वीउमनपाकाले चालू आवको सात महिनासम्मको अवधिमा केवल १ करोड २८ लाख सड्ढलन गरेको छ । त्यस्तै गतआवमा व्यवसाय करबापत रु. ३३ लाख सड्ढलन भएकोमा चालू आवको सात महिनासम्मको अवधिमा रु. १३ लाख मात्र सड्ढलन हुन सकेको छ । वीउमनपाकाले महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको सवारीकरबाट गतआव र चालू आवमा ठूलो नोक्सानी सहनुपरेको छ । गतआवमा २ करोड ७७ लाख ७७ हजारमा सवारीकर ठेक्कामा लिएका ठेकेदारले प्रहरीका कारण वीउमनपाकाले उपलब
मन्त्री त्रिपाठीद्वारा सिघियाही पुल उद्घाटन
प्रस, वीरगंज १२ फागुन/ भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले हरपुर गाविस–८ बडेर्वास्थित सिघियाही नदीमा नवनिर्मित पुलको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले सहमतिको सरकार गठनको प्रयास भइरहेको र राजनीतिक दलहरू अन्तिम सहमतिको नजिक पुगेका दाबी गरेका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका त्रिपाठीले मधेसको पहिचान तथा अधिकारसहितको सङ्घीयताको लागि सरकारमा रहेका मधेसी दलहरू लड्दै आएका बताए । शान्तिप्रक्रिया अन्तर्गत वर्तमान सरकारले सेना समायोजनको काम टु·ोमा पुर्‍याएको बताउँदै नेता त्रिपाठीले सहमतिको सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गराउनसक्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नगेन्द्र थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसभासद् अजय चौरसिया, तमलोपा बाराका अध्यक्ष एवं पूर्वसभासद् जयप्रकाश यादवलग
कड्ढाली टुर्नामेन्टमा कोमलपुर क्रिकेट विजयी
रामेश्वर मेहता, सिम्रौनगढ, १२ फागुन/ सिम्रौनगढमा आयोजित कड्ढाली टुर्नामेन्टको आज सम्पन्न फाइनल खेलमा कोमलपुर क्रिकेट टिम विजयी भएको छ । टस जिती ब्याटिङ गरेको कोमलपुरले निर्धारित २० ओभरको खेलमा १५३ रन बनाएको थियो । प्रतिउत्तरमा देवापुर टेटा क्रिकेट टिमले सबै विकेट गुमाएर १२३ रन मात्र बनाइ पराजय स्वीकार गर्‍यो । खेलको म्यान अफ दि म्याच कोमलपुर क्रिकेट टिमका हारुल अन्सारी घोषित भएका छन् । उनले ७८ रन लिएका थिए । सो अवसरमा मधेसी जनअधिकार फोरम (गण) बाराका अध्यक्ष रामकिशोर यादवले विजयी खेलाडीहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
१५ वर्षमुनिको फूटबलको उपाधि बाराका सनराइजलाई, वीरगंजमा पनि प्रतियोगिता शुरू
सिकेन्द्र पासवान, कलैया, १२ फागुन/ जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा म·लवार सञ्चालित १५ वर्षमुनिको फूटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार सम्पन्न फाइनल खेलमा निजगढ युवा क्लब पुरानो निजगढलाई एकका विरुद्ध दुइ गोल दिई सनराइज क्लब उमजन विजयी भएको छ । विजयी टिमका सञ्जय चौधरी र श्याम चौधरीले एक/एक गोल गरेका थिए भने निजगढका विमल धामीले अन्त्यमा एक गोल गरेका थिए । अखिल नेपाल फूटबल सङ्घका केन्द्रीय सदस्य एम. समिउल्लाहको प्रमुख आतिथ्यमा बारा जिल्ला फूटबल सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष क्यामुद्दिन मन्सुरको सभापतित्वमा भएको समारोहमा विजयी तथा उपविजयी टिमका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । बारा फूटबल सङ्घको आयोजनामा भएको उक्त खेलमा जिल्लाका १० वटा टिमहरूको सहभागिता थियो । यसैगरी १५ वर्षमुनिको राष्ट्रिय खेलका लागि खेलाडी चयन प्रक्रिया आजदेखि वीरगंजमा पनि शुरू भएको छ । नारायणी र·शालामा उद्घाटन खेल सम्पन्न भयो । ग्यालेक्सी युथ क्लब पिपरा र लक्ष्मनवा युवा क्लबबीचको खेलमा विवाद भएपछि खेल स्थगित भएको थियो । युवा क्लब बगही र युवा स्पोटर््स क्लब वीरगंजबीच निर्धारित अर्को खेल ब
प्याब्सन जुनियर फूटबल टुर्नामेन्टको उपाधि मनोकामना माविलाई
प्रस, वीरगंज, १२ फागुन/ अञ्चल प्रहरी कार्यालयको खेल मैदानमा आयोजित प्याब्सन जुनियर फूटबल टुर्नामेन्टको उपाधि मनोकामना माविले जितेको छ । मनोकामनाका जर्सी नं. ८ का साजन खानले खेल प्रारम्भ भएको ३, २४ र २७ औं मिनेटमा लगातार ३ गोल गरेर आफ्नो एकल प्रयासमा विद्यालयलाई उपाधि दिलाए । प्रतिउत्तरमा गौतमका विद्यार्थीहरूले भने कुनै गोल गर्न सकेनन् । फाइनल खेलमा उत्कृष्ट खेलाडीको पदक गौतम माविका सुशान्त न्यौपानेले हात पारे । यसैगरी बेस्ट डिफेन्समा गौतमका आतिश पटेल र बेस्टकिपरमा मनोकामनाका सृजन बस्नेत, बेस्ट मिडफिल्डरमा अनिल थापा र म्यान आफ दि सिरिज मनोकामनाकै साजन खानले प्राप्त गरेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष इमामुद्दिन अहमदको सभापतित्वमा सम्पन्न समापन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वीरगंजको नाम उच्च पार्न अनुशासित भई कडा परिश्रम गर्न बालबालिकाहरूलाई आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा प्याब्सनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अर्जुन शमशेर जबराले महिला क्रिकेट र महिला फूटबल खेलाडी उत्पादनतर्फ प्याब्सनले विशेष जोड दिने बताए । समाप
साप्ताहिक हाटबजार– उहिले र अहिले
- उमाशङ्कर द्विवेदी नेपालको आबादी हिमाल, पहाड र तराईमा छरिएर बसेको छ । शहरी क्षेत्र त्यति व्यापक नभएकोले अधिकांश जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेको अवस्था छ । जनसाधारणको दैनिक जीवनयापनका सामग्रीहरू शहरी क्षेत्रको बजारमा सहज उपलब्ध हुन्छ । ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरूको त्यस्तो बजारमा सहज पहुँच सम्भव हुँदैन । यसै समस्याको समाधानको लागि प्राचीनकालदेखि नै स्थानीय बजारको परिकल्पना भएको हो । पहाडी ठाउँहरूमा दुई/चार थुम्काहरूका बीचमा पायक पर्ने स्थानमा साप्ताहिक बजार लाग्ने गर्दछ । ती बजारलाई साप्ताहिक हटिया भन्ने गरिन्छ । यस्ता बजारहरू प्राय: हप्तामा दुई वा एक दिन अथवा कुनै निश्चित तिथिको दिन लाग्ने गर्दछ । जुन बार वा तिथिको दिन बजार लाग्ने निश्चित हुन्छ, त्यस बजारको नाम त्यसै बार वा तिथिको नामले प्रसिद्ध रहन्छ । उदाहरणको लागि आइतबारेबजार, म·लबारेबजार, औंशीबजार, नवमीबजारहरूलाई लिन सकिन्छ । तराईमा पनि शहरी क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका दुई/चार गाउँहरूको बीच पायक पर्ने स्थानमा यस्ता बजार कुनै निश्चित दिन लाग्ने गर्दछ । तराईमा यस्ता बजारहरू प्राय: हप्तामा दुईपटक लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस
मनुष्य जीवनको निर्माण नै यस प्रकार भएको छ कि न त्यो आफैंमा पूर्ण छ न सवर्था आत्मनिर्भर । हामी सबैलाई आफ्नो जीवनयात्रा पूरा गर्नका लागि एकअर्काको सहयोग एवं सहायताको आवश्यकता पर्छ । एक्लै एकाकी जीवन बिताउनु हामीमध्ये कसैका लागि पनि सम्भव छैन । हाम्रो जीवनको आधार सामूहिक भावना नै हो । यसै भावनाको बलले मनुष्य जातिको उन्नति र मानव सभ्यताको विकास भएको छ । यदि यो सामूहिक भावना नभएको भए, आपसी सहायता, सहयोग र पारस्परिकताको अभाव रहेको भए आज हामी आफूलाई जुन उन्नत दशामा देखिरहेका छौं, त्यो हुने थिएन, अपितु अन्य पशुझैं असंस्कृत तथा असभ्य जीवनयापन गरिरहेका हुन्थ्यौं । हामीमा यथार्थ मनुष्यताको जुन विकास भएको छ त्यो सहयोग एवं सामूहिक भावनाको आधारमा नै भएको हो र पुन: यसलाई सुरक्षित एवं विकासशील राख्नका लागि यसै आधारलाई दृढ र स्थायी बनाउनुपर्छ । आज हामी मानिसको जुन सुख–सुविधापूर्ण व्यवस्थित जीवन देखिरहेका छौं, त्यसको सारा श्रेय उसको त्यस सामूहिक एवं परस्पर सहयोगको भावनाले गर्दा नै हो । मानिसले यस खाल्टाखुल्टी जमिनलाई आफ्नो निवासयोग्य बनाएको छ, ठूल्ठूला पर्वत, ज·ल र सागरभित्र पसेर जीवन–निर्वाहको
प्रजिअ र डिएफओ टाँगियाबस्तीमा वन मासेको अभियोगमा दशजना पक्राउ
प्रस, निजगढ, ११ फागुन/ वन मासेको अभियोगमा शुक्रवार बाराको टाँगियाबस्ती–७ बाट दशजनालाई संयुक्त सुरक्षाफौजले नियन्त्रणमा लिएको छ । सो बस्तीमा शुक्रवार राति छापा मारी सुरक्षा फौजले अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा डुमरवाना बस्ने बाबुलाल वाईवा, ज·बहादुर स्याङतान, मोहनबहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर घलान, पद्म स्याङतान, जीतबहादुर मोक्तान, शुक्रबहादुर रुम्बा, आइतराम काल्ताङ, बुद्धिमान घिसिङ र निजगढ–७ बस्ने सानुकान्छा गोले रहेका छन् । पक्राउ परेकाहरूमध्ये केही व्यक्ति जिल्लाको मस्टवान्टेड सूचीमा रहेका जिल्ला सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । उक्त बस्ती क्षेत्रमा १० हजार क्युफिटभन्दा बढी अवैध काठ हुनसक्ने जिल्ला वन कार्यालय बाराका प्रमुख मनबहादुर खड्काले बताए । टाँगियाबस्ती क्षेत्रमा छापामारी शुरू गरिएको र छापामारी सम्पन्न भएपछि मात्र टोली फर्कने टाँगियाबस्ती पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए । उनले आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी थप हुनसक्ने बताए । प्रजिअ पुष्कर र जिल्ला वन प्रमुख मनबहादुर खड्का राति न
विभिन्न धर्मका अगुवाहरू एउटै थलोमा सबै धर्मको सार एउटै– प्रउ अधिकारी
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/ अन्तर धार्मिक समन्वय समितिको आयोजना र रेस नेपालको सहयोगमा धार्मिक सहिष्णुता र प्रवद्र्धनका आधार विषयक अन्तक्र्रिया आज वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ । समाजमा आइपरेका चुनौती र अप्ठयाराहरूलाई सबै समुदायले आफ्नै समस्या ठानेमा कुनै समस्या नआउने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले बताए । अतिवादको भावनाका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरू धार्मिक युद्धमा फसेको चर्चा गर्दै उनले सबै समुदाय, धर्म र आस्थाको भाव र लक्ष्य एउटै भएको बताए । “सबै धर्महरूको मर्म मानव कल्याण र लोकहित हो । धर्मलाई राजनीतिक रूप दिएमा समाजमा द्वन्द्व फैलने गर्छ । अन्धविश्वासले हाम्रो समाजमा सद्भाव खल्बलाइरहेको छ,” प्रउ अधिकारीको कथन थियो । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि धर्मका अगुवाहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिका सकारात्मक पक्षलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने सहभागी वक्ताहरूले सुझाएका थिए । धर्म जागरणका प्रतिनिधि मोहन राजपालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष केसी लामिछाने, ओमप्रकाश सिकरिया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर
प्याब्सन बाल फूटबल प्रतियोगिता फाइनलमा गौतम र मनोकामना
प्रस, वीरगंज, ११ फागुन/ अञ्चल प्रहरीको खेलकुद मैदानमा भइरहेको प्याब्सन फूटबल नकआउट टुर्नामेन्ट अन्तर्गत आज भएको सेमिफाइनल खेलमा मूनलाइट र सनराइजलाई हराउँदै मनोकामना र गौतम फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आज भएको पहिलो खेलमा मनोकामना र मूनलाइटबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मनोकामनाले ० का विरुद्ध ३ गोल दिई मूनलाइटलाई पराजित गरी फाइनलमा आफ्नो पहिलो दाबेदारी पेश गरेको थियो । उक्त खेलमा मनोकामनाका साजन खानलाई उत्कृष्ट खेलाडीको पदक माउन्ट एडमन्ड माविका निर्देशक अर्जुन शमशेर जबराले प्रदान गरेका थिए । दोस्रो खेल गौतम मावि र सनराइज माविबीच भएको थियो । उक्त खेलमा गौतमले सनराइजलाई ० का विरुद्ध २ गोलले पराजित गर्‍यो । उक्त खेलमा ज्ञानज्योति उच्च माविका रामकिशोर यादवले उत्कृष्ट खेलाडीको पदक प्रदान गरेका थिए । शनिवार हुने फाइनल खेल गौतम र मनोकामनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुवै टिमका खेलाडीहरूको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको दर्शकहरूले बताएका छन् ।
अध्यात्म दर्शनको उपदेश अखण्ड दिव्य सन्देश
- डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ चन्द्रमणि प्रसाईं कवि र निबन्धकारका रूपमा देखिएका स्रष्टा हुन् । मूलत: अध्यात्मवादी चिन्तनका सामग्री विशेषलाई यिनले आफ्ना कृतिहरूमा वण्र्य विषयवस्तु बनाएको दृष्टिगत हुन्छ । अध्यात्म दर्शनको संज्ञानबाट अभिप्रेरित प्रसाईं अद्यतन भौतिकवादी चिन्तनबाट प्रभावित यस युगका मानव जातिलाई आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूका माध्यमबाट सत्सन्देश दिन चाहन्छन् । कवि प्रसाईंका विभो काव्य (२०४४), युगज्योति खण्डकाव्य (२०४१), प्रिय प्राण आत्मकथ्य (२०४५), चन्द्रमणिका निबन्धहरू (२०४७), सूक्ष्म तर· निबन्ध सङ्ग्रह (२०४८), चन्द्रमणिका सूक्तिहरू (२०५३) आदि कृतिहरूको प्रकाशनपश्चात् अखण्ड दिव्यदर्शन नामक काव्य प्रकाशित भएको छ । यहाँ यसै कृतिको सङ्क्षिप्त समीक्षा हेतु प्रयास गरिएको छ । समीक्ष्य कृति अखण्ड दिव्य सन्देश अन्त: संवाद शैलीमा विरचित काव्य हो । यस काव्यलाई खण्डकाव्यका रूपमा लिन सकिन्छ । यस काव्यको विषयवस्तु तथा अभिव्यक्ति कला दुवैमा नितान्त नवीनता दृष्टिगोचर हुन्छ । विषयवस्तुको खास कथ्यतन्तु र त्यसको सङ्गतिपूर्ण एवं शृङ्खलाबद्ध प्रस्तुतीकरण यस काव्यमा पाइँदैन अपितु सांवादि
- उमाशङ्कर द्विवेदी समुद्र मन्थनबाट अन्य अमूल्य रत्नहरूका साथ ‘उच्चै:श्रवा’ नामक अश्वरत्न (घोडा) पनि निस्केको थियो । त्यस घोडालाई देखेर कद्रूले बहिनी विनतासित सोधिन्,“बहिनी, भन त यो घोडा कुन र·को छ ?” विनताले भनिन्,“दिदी, यो अश्वराज त श्वेतवर्ण (सेतो र·)को हो कि जस्तो छ, तपाईंलाई कुन र·को हो जस्तो लाग्दछ ? कद्रूले भनिन,“हुनत घोडाको र· सेतै हो तर पुच्छर चाहिँ कालो जस्तो देखिन्छ । ल हामी दुईले यसबारे सर्त राखौं । यदि तिम्रो कुरा साँचो भए म तिम्रो दासी बन्ने छु, होइन, मेरो कुरा साँचो भए तिमी मेरो दासी बन्नुपर्ने छ ।” यस प्रकारले दुइटै दिदीबहिनीले बाजी थापी अर्को दिन घोडा हेर्ने निश्चय गरेर घर फर्किए । घरमा आफ्नो कोठामा फर्केर कद्रूले विनतालाई छकाउ भनेर आफ्ना नाग छोराहरूको भेला गराएर आदेश दिइन्,“बाबुहरू, तिमीहरू कालो रौं बनेर उच्चै:श्रवा घोडाको पुच्छरमा गई बेरिएर कालो पारी देऊ, जसको कारणले मलाई सौताकी दासी बन्न नपरोस् । मेरो आज्ञा नमान्ने पुत्रहरूलाई मैले निकट भविष्यमा हुने जन्मेजय राजाको सर्पयज्ञमा आहुति दिने वचन दिएकी छु ।” कद्रू र विनताले यस प्रकारको बाजी थापेर रोष र आवेशमा रात्रि
मकवानपुरको साहित्यलाई सलाम
- सञ्जय साह ‘मित्र’ चितवनका प्रसिद्ध साहित्यकार एलबी क्षेत्रीले फागुन महिनाकै एउटा मकवानपुरे कार्यक्रममा भने– मकवानपुरको साहित्यलाई सलाम । सलाम भन्नुका पछाडि उनका आफ्नै तर्क हुन सक्छन् । तर, मकवानपुरको साहित्यले वास्तवमा फड्को मारेको छ । यस कुरालाई कसैले अस्वीकार गरेर पनि सक्दैन । एक किसिमले भन्ने हो भने साहित्य त्यहाँको संस्कृति बनिसकेको छ । फागुनको शनिवार हेटौंडाको थाहा सञ्चार एफएमले पाँचौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नारायणी अञ्चलस्तरीय साहित्यगोष्ठी गरेको थियो, जसमा नारायणीका सबै जिल्लाका साहित्यकारको भव्य उपस्थिति थियो । मकवानपुर त साहित्यको खेत नै भइहाल्यो नारायणीका लागि अब । त्यहाँ आली र कान्ला तथा बारी र खेतमा सबैतिर साहित्यको बाली मौलाएको देखिन्छ । यस अर्थमा कि त्यहाँका करिब चार दर्जन सर्जकले काव्यपाठ गरेका थिए, मञ्चमा । सञ्चालक राम अविकास हिजोसम्म नाम र बिधा टिपाएकाले मात्र कविता भन्न पाउनुपर्ने र आज कसैले चाहेर पनि भन्न नपाइने भन्दै बारम्बार आज कविता लिएर कार्यक्रममा आएका स्रष्टाहरूसित माफी मागिरहेका थिए । रौतहटबाट रमेश समर्थन, हरिकृष्ण काफ्ले र म गरी तीनजनालाई आयोजकल